प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्दै आएका बाबुराम ! जब सत्तापक्षकै सिटमा आएर बसेपछी……::देश र जनताप्रति समर्पित
प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्दै आएका बाबुराम ! जब सत्तापक्षकै सिटमा आएर बसेपछी……
पोखरा- पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको लहरको कुर्सीमा बस्न थालेका छन ।उनी सभामुखको दायाँतर्फ सत्तापक्षको लहरको कुर्सीमा बस्न थालेका हुन्। उनी प्रतिपक्षी राजपाका सांसदसँगै प्रतिपक्षीको लहरमा बस्दै आएका थिए।
निर्वाचन आयोगले संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण भएको पत्राचार गरेसँगै बाबुराम भट्टराई सत्तारुढ सांसद बनेका छन्। उनी सत्तापक्षको लहरमा बस्न थालेका हुन्। एकीकृत भएर बनेको समाजवादी पार्टी हाल सरकारमा सहभागि छ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले पार्टी एकीकरण भैसकेको भन्दै केही दिन अघि सभामुखलाई बाबुराम भट्टराईको सिट देखाइदिन आग्रह गरेका थिए। सभामुखको कुर्सीमा रहेकी उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले निर्वाचन आयोगको पत्र नआएको बताएकी थिइन्।
प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले भट्टराईलाई स्वागत गरेका थिए।